Akụkọ - Ihe eji eme ihe
Wuru snow adịghị n'oge okpomọkụ uwe akwa, mere nke chemical eriri ihe onwunwe, bụ wheel nke ngwaọrụ. Chiffon ákwà ndọlị na-eguzogide ọgwụ zuru oke, na elu ahụ nwere ọmarịcha anụ ahụ, nke dị jụụ, nke na-enye ume ọhụrụ, otu esi eyi otu ọ dị mma.
Ma akwa chiffon na usoro mmepụta na-ekewa n'ime oke dị elu ma dị ala, nhọrọ ịhọrọ ịdabere n'aka iji metụ aka, iji anya gị hụ, ahọrọla ihe ọjọọ iji chekwaa ego, ga-azụta ogo. Ezigbo akwa chiffon na-eyi na ahụ ga-enwe ọsụsọ na-ebu anụ ahụ, akwa akwa, akwa akwa chiffon agaghị enwe nsogbu dị otú ahụ.
2. Eriri ohuru
The regenerated eriri sitere n'ike mmụọ nsọ silkworm spinning, na-eji eke ihe dị ka akụrụngwa, chemical nhazi n'ime lekwasị ngwọta, na mgbe ahụ spinning nhazi iji mee akwa eriri. Site na mmiri mmịba magburu onwe ya na ikuku ikuku, ọ bụ n'ụzọ doro anya na eriri kemịkal kachasị mma maka oge ọkọchị ma ọ bụghị nke nnyapade.
3. Sịntetik eriri
Sịntetik eriri bụ eriri kemịkal dị ọcha, nke a makwaara dị ka polyester, nke bụ akwa kachasị na akwa uwe n'oge ọkọchị. Ndị nwere nsogbu anụ ahụ nwere ike iche na ibute ihe a ga-eme ka ahụ ghara iru ala. N'ezie, ọtụtụ n'ime eriri polyester ugbu a na-arụ ọrụ ma ọbụnadị karịa ntụ. Fọdụ uwe Uniqlo na-ejikwa eriri polyester, yabụ na ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị gbasara ihe nfụkasị ahụ.
Mgbe ịzụrụ uwe n'oge ọkọchị, ma e wezụga ịtụle ụdị, ọ dị mkpa ịmara otu esi ahọrọ ihe, nke dị mma ma dị mma iji eyi. Mgbe m gụsịrị isiokwu a, ekwenyere m na ị ga-enwerịrị obi ala mgbe ị na-ahọrọ uwe, agaghị ahọrọ ihe ọjọọ.